Isipiliyoni seminyaka engaphezu kwengu-22
ISuneTex® MagicalTex® iSunewell®
Izimiso Zethu Eziqondisayo
Amanani, ukuziphatha, nokuziphatha
I-Greenguard REACH SGS UL
Indwangu Yesikrini Esilangeni
Indwangu yePolyester Sunscreen
Indwangu ye-fiberglass elangeni
Indwangu Yesikhumba Esivikela Esilangeni
Indwangu yePolyester Roller Blinds
Indwangu yeVerman Blinds
Indwangu yeShangri-la Blinds
Indwangu eqondile ye-Blinds
Indwangu Yezinyosi Iphuphuthekisa Indwangu
Ikhaya Decor Verman Blinds Indwangu Semi-blackout
New Design Isitolo esidayisa yonke impahla Ladder Tape Shangri-La Blinds F ...
Ikhaya Ukuhlobisa Ovundlile Shangri-La Blind Indwangu Semi-B ...
Kathathu Shade Shangri-La Roller Blinds Indwangu Ye-Res ...
Ukuhlobisa Kwasekhaya I-Double Rainbow Blinds Indwangu Yehhovisi
China Decor Ubumfihlo Zebra Blind Indwangu Yehhovisi Wi ...
Indwangu Emibalabala Emibili Ephuphuthekayo Indwangu engu-100% yePolyester
I-Rainbow Roller Blinds Day-Night-Zebra Curtain Shades ...
Ukuphrinta Blackout Zebra Day and Night Rainbow Duo Bl ...
I-China Roller Blinds Day & Night Shades Part Com ...
China Office Side Screen Ngokwezifiso Sunscreen Zebra Auto ...
China Machine Mainland Faux Linen Zebra Dual Day futhi ...
Shutter Iwindi Sunscreen Iphethini Spring Roller Bli ...
China Windows Sun Shade Polyester Rolling ezinenjini ...
Outdoor Manual Iwindi Shutter Isigamu Shade Dual Layer ...
Ukwakha Sunscreen Indwangu Kusukela China Blinds Facto ...
Isifundo se-Sunlight Screen Roller Sokuhweba Kwelanga ...
Kwenziwe ngentando Ububanzi China Windows Ukuhlobisa Curtain Co ...
China Umkhiqizi Sunscreen Roller Blinds Indwangu Su ...
Isitolo esidayisa yonke impahla Anti-UV fiberglass Sunscreen Izindwangu Ukuze R ...
Indwangu Yamahhala Yesampula Semi Blackout Roller Blind
2020 New Style Verman Blinds Indwangu 3m Ububanzi Behhovisi
Indwangu eyimpumputhe yaseVerman ingumkhiqizo othuthukisiwe wendwangu eyimpumputhe yakwaShangri-La. Akugcini nje ukugcina umphumela omnyama weveli yendwangu eyimpumputhe yeShangri-La, kepha futhi kunesitayela semfashini esilula sezimpumputhe ze-venetian. Umklamo ovulekile we-webbing wendwangu eyimpumputhe ye-verman ulungele ukususwa kothuli nsuku zonke, ukwehla neminye imisebenzi yokuhlanza. Indwangu yeGroupeve Verman eyimpumputhe iyisinqumo esihle sephrojekthi yakho yempumputhe yasekhaya. Indwangu isebenzisa imicu ekhethekile futhi ibhekane nokwelashwa kokushisa okuphezulu, okuhlala isikhathi eside futhi okungasuki.
Ukulungiswa nokuhlanzwa kwendwangu ye-Groupeve zebra blinds kunje ngezansi:
1.Ukudonsa komshini nokususwa kothuli.
2. Sebenzisa indwangu ethambile noma isipanji esimanziswe ngamanzi afudumele ukusula amakhethini ngesikhathi kususwa uthuli / inzalo. Uma kunesidingo, ama-detergents amnene angafakwa. Sula ngobumnene ukuvimbela ukushwabana noma ukulimaza indwangu. Ukusula kungenza ikhethini lihlanzeke.
3. Sebenzisa i-steam iron ukufafaza endaweni engamamitha ayi-10 kude nekhethini lendwangu, elingaba nomphumela wokususa / ukuvala inzalo.
I-China Factory Supply Silhouette Blinds Fabric 100% Polyester
Indwangu eyimpumputhe ye-Silhouette ingumkhiqizo othuthukisiwe wendwangu eyimpumputhe ye-Shangri-La, kuyinketho yokugcina ubumfihlo nokulawula ukukhanya. Ikhaba limisiwe phakathi kwezingqimba ezimbili zezikrini. Lapho kuvulwa izimpumputhe, indawo ebukekayo iyabonakala ngezikrini, futhi ukukhanya okungena ekamelweni nakho kuhlungwa ukuze kuthambe; lapho izimpumputhe zivaliwe, ungaqinisekisa ubumfihlo bomuntu siqu ngenkathi uqokomisa ukuma okuhle okuthambile kwe-Shangri-La blind.
Ngamafuphi, i-silhouette blinds indwangu yethu iyona engcono kunazo zonke yezimboni eziyimpumputhe noma abathengisi abakhulu. Singanikela ngamasampula wamahhala we-silhouette blinds fabric kumakhasimende ethu. Futhi umqulu ngamunye wothingo oluyimpumputhe lwendwangu kufanele udlule ukuhlolwa kwekhwalithi ngaphambi kokuthunyelwa.
Indwangu Eqinile Yelayini le-Shangri-La Blinds Indwangu engu-100% Emnyama
I-ladder tape shangri-la blinds indwangu ingumkhiqizo othuthukisiwe wendwangu eyimpumputhe yeShangri-La. Akugcini nje ukugcina umphumela omnyama weveli yendwangu eyimpumputhe yeShangri-La, kepha futhi kunesitayela semfashini esilula sezimpumputhe ze-venetian. Indwangu ye-Groupeve Ladder tape shangri-la blinds ingakulethela umuzwa osondele kakhulu emvelweni, ukhululekile futhi ujabule, futhi ingakulethela umuzwa wokuthula nokuba sepharadesi. Ihlukaniswe yaba yindwangu yeledi-blackout ladder tape shangri-la indwangu eyimpumputhe kanye ne-blackout ladder tape shangri-la blind.
Okuqukethwe kwensimbi ye-ladder tape shangri-la blind is 100% polyester. Sinikeza amasampula wamahhala kuwo wonke amakhasimende, ungabheka ikhwalithi bese ukhetha umbala ngqo ngaphambi koku-oda. Ngaphezu, izindwangu zethu zicebile ngombala futhi zilandela ukuthambekela kwemfashini yamazwe omhlaba.
Indwangu Yesimanjemanje I-Verman Blinds Fabric 100% Polyester
Indwangu eyimpumputhe yaseVerman ingumklamo omusha sha ohlanganisa isikrini sendwangu, iwindi lesikrini kanye ne-venetian blind. Inemisebenzi yokufiphaza nokuhlobisa ikhethini. Futhi lisetshenziswa kakhulu emahhovisi, emakhaya, emahhotela, ezimbonini nakwezinye izikhathi. Indwangu eyimpumputhe yeGroupeve Verman ingakulethela umuzwa osondele ngokungapheli emvelweni, ukhululekile futhi ujabule, futhi kungakulethela umuzwa wokuthula nokuba sepharadesi. Ingahlukaniswa ibe yindwangu yokuphuphuthekisa i-verman semi-blackout futhi i-blackman i-blinder indwangu emnyama.
Okuqukethwe kwendwangu ye-verman blinds yi-100% polyester. Sinikeza amasampula wamahhala kuwo wonke amakhasimende, ungabheka ikhwalithi bese ukhetha umbala ngqo ngaphambi koku-oda. Ngaphezu, izindwangu zethu zicebile ngombala futhi zilandela ukuthambekela kwemfashini yamazwe omhlaba.
Indwangu Entsha Elegant Silhouette Blinds Indwangu 100% Blackout
Indwangu eyimpumputhe ye-Silhouette ingumklamo omusha sha ohlanganisa isikrini sendwangu, isikrini sefasitela kanye ne-venetian blind. Inemisebenzi yokufiphaza nokuhlobisa ikhethini.
Ukugcinwa nokuhlanzwa kwezindwangu ze-Groupeve zebra blinds kunje ngezansi:
1. Ukuhlanzwa kwe-Ultrasonic kwenza indwangu ikhanye njengokusha.
2. Umshini ukuncela nokususwa kothuli.
3. Sula ukuhlanza ukufeza ukuhlanza okujulile, sicela usebenzise umshini wokuhlanza onekhanda lokuxubha ngobunono. Ungasebenzisa futhi isomisi sezinwele (asibekelwe ukushisa) ukushaya uthuli kumhlobiso wewindi.
I-silhouette blinds indwangu yethu ingukukhetha okungcono kakhulu kokungaboni amafektri noma abathengisi. Singanikela ngamasampula wamahhala we-silhouette blinds fabric kumakhasimende ethu. Futhi umqulu ngamunye wothingo oluyimpumputhe lwendwangu kufanele udlule ukuhlolwa kwekhwalithi ngaphambi kokuthunyelwa.
Idizayini Entsha Yesitebhisi Sokudayisa Isitolo esidayisa yonke impahla Shangri-La Blinds Indwangu Emnyama
I-ladder tape shangri-la blinds indwangu ingumkhiqizo othuthukisiwe wendwangu eyimpumputhe ye-Shangri-La, kuyinketho yokugcina ubumfihlo nokulawula ukukhanya. I-groupeve ladder tape shangri-la indwangu eyimpumputhe ingakulethela umuzwa osondele ngokungapheli emvelweni, ukhululekile futhi ujabule, futhi kungakulethela umuzwa wokuthula nokuba sepharadesi. Kungukukhetha okuhle kwephrojekthi yakho yokuphuphuthekisa ikhaya. Indwangu isebenzisa imicu ekhethekile futhi ibhekane nokwelashwa kokushisa okuphezulu, okuhlala isikhathi eside futhi okungasuki.
Ubude be-roll obungama-30m, futhi ukupakisha kuyishubhu lephepha eliqinile ngeroli ngayinye. Sinikeza amasampula wamahhala kuwo wonke amakhasimende, ungabheka ikhwalithi bese ukhetha umbala ngqo ngaphambi koku-oda. Ngaphezu, izindwangu zethu zicebile ngombala futhi zilandela ukuthambekela kwemfashini yamazwe omhlaba.
Ifektri Inani Verman Blinds Indwangu Semi-Blackout
Indwangu yempumputhe iVerman ingumkhiqizo othuthukisiwe wendwangu eyi-Shangri-La blind, kuwumklamo omusha sha ohlanganisa indwangu yesikrini, iwindi screen kanye ne-venetian blind. Inemisebenzi yokufiphaza nokuhlobisa ikhethini. Futhi lisetshenziswa kakhulu emahhovisi, emakhaya, emahhotela, ezimbonini nakwezinye izikhathi. Kuyinketho yokugcina ubumfihlo nokulawula ukukhanya.
Okuqukethwe kwendwangu ye-verman blinds yi-100% polyester. Ubude be-roll obungama-30m, futhi ukupakisha kuyishubhu lephepha eliqinile ngeroli ngayinye. Sinikeza amasampula wamahhala kuwo wonke amakhasimende, ungabheka ikhwalithi bese ukhetha umbala ngqo ngaphambi koku-oda. Ngaphezu, izindwangu zethu zicebile ngombala futhi zilandela ukuthambekela kwemfashini yamazwe omhlaba.
I-High Quality Ladder Tape I-Shangri-La Blinds Indwangu 100% Polyester
Indwangu ye-ladder tape shangri-la blinds idizayini entsha sha ehlanganisa indwangu yesikrini, iwindi screen kanye ne-venetian blind. Inemisebenzi yokufiphaza nokuhlobisa ikhethini. Futhi lisetshenziswa kakhulu emahhovisi, emakhaya, emahhotela, ezimbonini nakwezinye izikhathi. Kuyinketho yokugcina ubumfihlo nokulawula ukukhanya. Lapho kuvulwa izimpumputhe, indawo enhle ingabonakala ezikrinini, lapho izimpumputhe zivaliwe, ungaqinisekisa ubumfihlo bomuntu siqu.
Indwangu isebenzisa imicu ekhethekile futhi ibhekane nokwelashwa kokushisa okuphezulu, okuhlala isikhathi eside futhi okungasuki. Futhi okokusebenza kwesiteji se-shangri-la blinds indwangu yi-100% polyester. Sinikeza amasampula wamahhala kuwo wonke amakhasimende, ungabheka ikhwalithi bese ukhetha umbala ngqo ngaphambi koku-oda. Ngaphezu, izindwangu zethu zicebile ngombala futhi zilandela ukuthambekela kwemfashini yamazwe omhlaba.
Indwangu eyimpumputhe iVerman ingumkhiqizo othuthukisiwe wendwangu eyimpumputhe yakwaShangri-La, ehlanganisa indwangu yesikrini, iwindi screen kanye ne-venetian blind. Inemisebenzi yokufiphaza nokuhlobisa ikhethini, okwenza kube yisinqumo esihle ukugcina ubumfihlo nokulawula ukukhanya. Indwangu ye-groupeve verman eyimpumputhe ingakulethela umuzwa wokusondela ngokungapheli emvelweni, ukhululekile futhi ujabule, futhi kungakulethela umuzwa wokuthula nokuba sepharadesi.
Indwangu isebenzisa imicu ekhethekile futhi ibhekane nokwelashwa kokushisa okuphezulu, okuhlala isikhathi eside futhi okungasuki. Okuqukethwe kwendwangu ye-verman blinds yi-100% polyester. Sinikeza amasampula wamahhala kuwo wonke amakhasimende, ungabheka ikhwalithi bese ukhetha umbala ngqo ngaphambi koku-oda. Ngaphezu, izindwangu zethu zicebile ngombala futhi zilandela ukuthambekela kwemfashini yamazwe omhlaba.
2020 New Style Kathathu Layer Indwangu Semi-Blackout
Izindwangu zesendlalelo seqoqo ezintathu zihlukile ekubunjweni futhi zinhle ngokubukeka. Ukuxhuma izindwangu ezivundlile phakathi kwezendlalelo ezimbili zezindwangu kungagcina igumbi lithambile. Vula i-blade ukuze ulungise ukuqina kwesibani. Indwangu yokuthungwa eyingqayizivele ingagcina umbala ungaguquguquki isikhathi eside. Ukufiphaza okuqinile. Ukuhlanzwa kwe-Ultrasonic kwezindwangu kungasetshenziselwa ukwenza izindwangu zibukeke zikhanya njengokusha.
Ngokuya ngezimpawu zendwangu yesendlalelo ephindwe kathathu, ingahlukaniswa ibe yindwangu yesendlalelo esima-blackout semi-blackout nendwangu engqimba kathathu yomnyama. Indaba yendwangu yesendlalelo kathathu ingu-100% i-polyester. I-Groupeve inesipiliyoni seminyaka engaphezu kwengu-16 sokwenza indwangu yendwangu enhle neyindayi.
I-Shangri-La blinds idizayini entsha ehlanganisa amakhethini kagesi, izikrini zamawindi, ama-blind venetian nama-roller blinds. Izimpumputhe zakwaShangri-La emakethe kumele ziqhathanise izimfanelo ezimbili ezisindayo: ukucaca nokukhululeka. Ukucaca kuboniswa ubukhulu, ukwakheka kanye nezinto zensimbi engxenyeni enezikhala. Lapho kuvulwa ukucaciseleka okuphezulu kweShangri-La, ukukhanya okungena egumbini kuyachichima futhi kuthambile; lapho ivaliwe, ingabuye ifihle ubumfihlo kahle. Izinga lemiphetho evulekile libonakala kakhulu ezingeni le-polymerization ye-mesh nengxenye eqinile yentambo.
Indwangu esezingeni eliphezulu ye-Groupeve shangri-La blind ingamelana nokudonsa kwamandla amakhulu, futhi ngeke ikhiqize ama-burrs anzima ekusetshenzisweni kwansuku zonke. Ngokufingqa, lapho ukhetha indwangu, sicela unake ikhwalithi, kungaleso sikhathi kuphela lapho ungakhetha khona indwangu ye-shangri-la blinds eyenelisayo, enethezekile futhi ethembekile.
Indwangu Ehlala Isikhathi Eside Ye-Shangri-La Blind Semi-blackout
I-Shangri-La blinds idizayini entsha ehlanganisa amakhethini kagesi, izikrini zamawindi, ama-blind venetian nama-roller blinds. Impilo yesevisi yendwangu ye-blind blind ye-Shangri-La yinde kakhulu, iyamelana nokushisa okuphezulu namakhaza aphansi ngenxa yezimpawu zayo. Ngokuyinhloko, inkinga yempilo esehlisiwe ngenxa yethempelesha ephansi ayenzeki ezindaweni ezinamahora amade okukhanya kwelanga noma amazinga okushisa aphansi ebusika. Ngale ndlela, impilo yokusebenza kwe-Shangri-La yandiswa kakhulu.
Uma indawo yasendlini ihle kakhulu, ngaphezu kokuwa nokuhlanzwa nsuku zonke kwenani elincane lothuli endwangwini, kungafinyelela umphumela wokusebenza kweminyaka engaphezu kwengu-10.
Ikheli: Cha. 988 Isigaba Esiphakathi seJiannan Avenue, High-Tech. IZone, Chengdu, China